Sirni Dargii Duraanii Deebi’e! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSirni Dargii Duraanii Deebi’e!
Sirni Dargii Duraanii Deebi’e
Nama Karaa irratti argan Cufa Irreen guuranii ukkaamsanii Gara Adda Waraanatti guuraa jiru.
Daa’imman umuriin isaanii waggaa 18 hin guutne dabalatee Oromiyaa keessatti dargaggootni jumulaan ukkaamsamanii mooraa waraanaatti ergamaa jiraachuun barame.
Murni pp olaantummaa Abiyyiin gaggeeffamu lola TPLF waliin gaggeessuun erga waraanni raayyaa ittisa biyyaa injifatamee bahee as humna addaa naannoolee biroo irraa TPLFn akka lolaniif gara sanatti dirqamaan ergaa kan jiru yoo tahu yeroo ammaa kanas loltootni humna addaa naannoolee waraana irratti osoo hin bobbahiin harka kennachaa akka jiran suuraalee fi vidiyooleen karaalee miidiyaalee hawaasaa tamsa’aa jiran ni mul’isu.
Torban darbe keessa loltootni humna addaa oromiyaa baayyinni isaanii 10,000 tahan lola daangaa babal’ifannaa naannoo amaaraa fi naannoo Tigiraay gidduutti gaggeeffamu irratti naannoo Amaaraa deeggaranii humnoota waraanaa Tigiraayiin loluuf karaa Affaar gar asana imalan hedduun isaanii wareegamuu fi dhibbootaan lakkaayaman booji’amuu harka loltoota TPLF jiru.
Murni Abbaa Irree Abiyyi Ahimed lubbuu ilmaan hiyyeessaatti kan qoosu yeroo ammaa kanas Oromiyaa keessatti ilmaan hiyyeessaa umuriin isaanii waraanaaf hin geenye dabalatee dirqamaan gara leenjii waraanaatti humnootni waraanaa ukkaamsanii qabanii bobbaasaa akka jiran maddeen keenya Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa nuuf gabaasaniiru.
Akka Kanaan Adoolessa 21/2020 irraa eegalee waraanni poolisii Oromiyaa fi Poolisiin Federaalaa waliin tahuun godina addaa naannawa Finfinnee magaalota akka Sabbataa fi Buraayyuu keessatti dargaggoota hedduu daandii irraa qabanii humnaan gara mooraa waraanaatti geessuuf walitti qabaa akka jiran maddeen keenya SQBOtti himaniiru. Akka maddeen SQBO jedhanitti humnootni waraanaa Magaalaa Sabbataa fi Buraayyuu keessatti ijoollota kophee qulqulleessituu fi daandiirra ba’aa baachaa rakkattee jiraattu jumulaan qabee akka walitti qabee mooraa waraanaatti erguuf jiru nuuf addeessaniiru.
Oduuma wal fakkaatuun godina horroo guduruu wallaggaa magaalaa shaambuutti guyyaa har’aa adoolessa 22/2021 daa’imman umuriin isaanii waggaa 18 hin guutne dabalatee kanneen kophee qulqulleessanii fi daandiirra jiraatan dabalatee dargaggoota hedduu warra hojii humnaan jiraatu wal gahiif barbaadamtu jechuun qaamotni nageenyaa erga walitti isaan qabanii booda humna waraanaa itti waamuun gara buufata Konkolaataa Magaalaa shaambuutti daa’imman waggaa 18 hin guutnee fi dargaggoota qaban gara mooraa waraanaatti erguuf walitti qabaa turuu isaanii maddi keenya naannichaa nuuf himeera.
Akka maddi keenya magaalaa shaambuu irraa nuuf himetti maatiin dargaggoota humni waraanaa dirqamaan gara waraanaatti erguuf walitti qabamanii jiranii dhagahanii gara buufata konkolaataa bakka ijoolleen walitti qabamanii jiraniitti deemanii ilmaan isaanii lakkisiisifachuuf yaalii godhan humni waraanaa naannicha jiru aara immimmaanessu maatii dargaggootatati lakkisuun reebicha irraan gahuun akka isaan ariiye maddeen Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo magaalaa shaambuu nuuf dhaamaniiru.
Kibba bahaa Oromiyaa Godina Baha Baalee aanaa Gindhiir ganda Dalloo sabrootti nama deeggarsa Waraanaaf hin kennuu jedhe ummata jumulaan hidhaatti guuraa kan jiran yoo tahu gama biraan immoo qeerroo naannichaa hojii isiniif kennina jechuun erga walitti qabanii booda humnaan guuranii mooraa waraanaatti erguuf waraanaan walitti qabanii ergaa akka jiran beekameera.
Shawaa bahaa Ona Adaamii tulluu magaalaa Baatuuttis haaluma wal fakkaatuun Dargaggoota hojii humnaa hojjatuuf hojii barbaacha magaalaa keessa dhaabbatan walitti qabuun gara mooraa waraanaatti geessaa jiraachuu maddeen sagalee Bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaa irraa nuuf himaniiru.
Daraggootni hojii dhaboon maqaa hojii isiniif kennina jedhuun bakkoota hundatti walitti qabanii jumulaan mooraa waraanaatti erguuf akka qophii irra jiranii fi ajajni kun Adoolessa 20/2021 akka Abiyyii irraa gara kaabinootaatti darbe maddeen keenya nuuf himaniiru.
Caalaa Zaaraa gurbaan Amanuel addababaayii Dambidollotti ajjeesee, harka WBO galee jira.
Breaking: Jarren kun adeemsi isaanii dogoggora akka ta'e hubachuun gara dhaabaatti deebi'uuf murteessaniiru.
#Breaking Guyyaa har'aa 1. Araarsoo Biqilaa 2. Jabeessaa Gabbisaa 3. Xilaahun Bantii adeemsi isaanii dogoggora…
Pirezidaantiin FDRI duraanii Doktar Nagaasoo Gidaadaa boqatan.
Pirezidaantiin FDRI duraanii Doktar Nagaasoo Gidaadaa boqatan. Doktar Nagaasoon Jarmanitti waldhaansa irra turan. Doktar Nagaasoon…